Astrology - isayensi lwasendulo. Ngisho nasezikhathini zasendulo yayibizwa waphawula ukuthi usuku lokuzalwa kungathinta phetho. Uma abantu abathintekayo ngomunye futhi le planethi, izinhlamvu yabo kungaba okufanayo. namasiko ehlukene kuye kwadingeka izici zawo siqu futhi izinhlobo izinkanyezi, kodwa kulezi zinsuku kukhona version ethandwa kakhulu futhi enza izinto ezihlukahlukene kuphela. Ufuna ukwazi okwengeziwe ngalo? Joyina ufunda le ncwajana.
Lihunyushwe kwelesiHeberu elithi yamaGreki asendulo elithi "nezinkanyezi ezihambelana nosuku lomuntu" kusho "ngiyinhloli kokubusa kwakhe." Kuwo lo nyaka, ilanga kwenza ukuhamba ebonakalayo, ukwakha umbuthano enkulu sphere yasezulwini (the Ecliptic). Ngo kwenkathi ngayinye isikhathi Emhlabeni kuthinte lawo noma ezinye izinto ezisemkhathini. Horoscope - isikhundla ekutholeni Sun, Moon futhi kwamanye amaplanethi phezu Ecliptic ngesikhathi esinikeziwe.
Izinhlobo izinkanyezi ethulwa ngezansi. Kuyinto ukwazi ukuthi abafunda izinkanyezi lasendulo wanikeza incazelo ehlukile izwi. Horoscope eGrisi lasendulo ngokuthi uphawu esiqondile mayelana Ecliptic ekuphumeni uphawu.
Njengoba kuyiqiniso ukuthi ababhula ngezinkanyezi basekela izibikezelo zabo
Horoscope ungakwazi ukwakha hhayi kuphela maqondana ezizokwehlela abantu futhi esikhathini esizako. Ngalo sizokwazi zibikezela ngokunembile ezinye impumelelo umcimbi. Engingakusho nje ukwazi kwendawo kanye nesikhathi.
Horoscope - uhlobo kwelivi kwezindikimba zasezulwini ku elinikeziwe indawo futhi ngesikhathi. Nokho, esikhundleni izixhumanisi evamile yokutholwa acabangele longitude Ecliptic ngoba into inikezwe. Lokhu value lubonakaliswa degrees. Evamile, lo Ecliptic sihlukene phakathi emjikelezweni zezinkanyezi, okuyinto ihlukaniswe emikhakheni ethile. Nambili zalezi zingxenye, futhi ngayinye kuwo kukhona degrees amathathu. Manje sithatha sihlolisise izinhlobo izinkanyezi.
Igama elithi "natal" kubonisa ukuthi ngesikhathi sokuzalwa komuntu libhekisela babelwazi usuku oluqondile lokuzalwa komuntu. Kungenze ngamunye. Ukuze wenze lokhu, kumele wazi nje kuphela ngosuku, inyanga nonyaka lokuzalwa, kodwa isikhathi ngqo amahora nemizuzu (kungaba iphutha encane), kanye kwendawo nezwe elincane.
Kukholakala ukuthi zonke izinhlobo izinkanyezi by usuku lokuzalwa ngokugcwele kakhudlwana phetho womuntu. Natal ngesikhathi sokuzalwa komuntu kungembula amehlo yomuntu ukuze ikhono lakhe, kuthambekela futhi ezinye izimo zokuphila.
nezinkanyezi ezihambelana nosuku lomuntu wasekhaya
Njengoba ungase ukuqagela, lokhu ngesikhathi sokuzalwa komuntu akuxhomekile ukuthi wazalelwaphi, futhi indawo wamanje ohlala kulo. Ngibuye ngilakhe, futhi udinga ukwazi babelwazi usuku oluqondile lokuzalwa. Ngokuvamile ababusebenzisayo abantu abafuna inkululeko yokushintsha indawo yokuhlala. Ngakho, ungakhetha libe yidolobha eliwedlula noma ugweme amaphutha, uma hambisa kuzoholela enkingeni.
Lolu hlobo sokuzalwa komuntu ababhula ngezinkanyezi ngokuvamile ukwakha ukuze ubone ukuthi ekuphileni kwabo kwangaphambili kuthinte isiphetho samanje indoda. Yakhiwe ngu- ekuphumeni inyanga engeyokuqala.
nezinkanyezi ezihambelana nosuku lomuntu thematic
Encwadini le sizoxoxa ngokuningiliziwe izinhlobo izinkanyezi. Theme, ngokukhethekile, Kwakhiwa ukuze adalule ngokugcwele izimo zokuphila, sphere zalo ezihlukahlukene. Ngokwesibonelo, uphawu, kubhebhetseka kweludvweshu, idluliselwe degree of Venus lembula ukuthi kungenzeka uthando futhi romance. Mercury unesibopho intelligence yokuthengisa amakhono.
Lokhu ngesikhathi sokuzalwa komuntu kuze ukuthola ukuhambisana yezihloko ezimbili. Ngokuvamile esetshenziswa ngokukhetha naye umshado.
Isayensi yanamuhla jikelele, ke unezinkolelo zonke kunako konke wadala ososayensi ongqondongqondo. Okwamanje, kunezinhlobo izinkanyezi lula kakhudlwana. Imihlobo ehlukeneko izibalo uvumele ukwazi isiphetho indoda kanye nekhodi digital ngokulandelana kwezinhlamvu zamagama. Indlela ethandwa kakhulu kuyinto yokutholwa ngesisekelo nezinkanyezi ezihambelana nosuku lomuntu elingu - theorem kaPythagoras. Kuyinto ukwazi ukuthi lokhu oluvelele sezibalo ngesiGreki kwaba konke okunye namanje futhi ethile eyimfihlakalo.
Uma sicabangela izinhlobo izinkanyezi iminyaka, umthombo ethandwa kakhulu kolwazi isekhona kuze kube yilolu suku ikhalenda Eastern. nezinkanyezi ezihambelana nosuku lomuntu Chinese igxile kwethonya isigqi Saturn sika Ngokwesayensi yokuhlolwa kwezinkanyezi, i-Jupiter ne-Moon, futhi ihlukaniswe yaba imijikelezo engu-nambili. Ababhula Ngezinkanyezi wenze umhlahlo generalized ngamunye izimpawu nambili.
nezinkanyezi ezihambelana nosuku lomuntu waseGibhithe
Siyazi ukuthi kukhona izinhlobo izinkanyezi for ngonyaka lokuzalwa (natal, wendawo, Chinese). EGibhithe lasendulo, izazi zezinkanyezi angabuka uzifihlile ukubaluleka kwabantu, usebenzisa iDemo ngezikhathi by izinyanga. Lena uhlelo eyinkimbinkimbi, elingazange aphile emphakathini wanamuhla. Uma-Chinese ngesikhathi sokuzalwa komuntu abashisekeli uphawu yizilwane kuzo zonke ingxenye unkulunkulu waseGibhithe lwezilawuli isikhathi.
Modern Zodiac yasungulwa lula futhi waqamba ngezinkanyezi IsiZulu Alan Leo ekuqaleni kwekhulu lama-20. Waqale wadala ezinkanyezini ngamunye, kodwa ngenxa inani elikhulu oda waphoqeleka ukuba alethe ukubalisisa kwabo kuya ufushanisiwe kusho. Kwavela ukuthi sonke bayakujabulela ukusebenzisa kuze kube yilolu suku. Zodiac igxile kwethonya kwelanga maqondana ezinkanyezini kokubeletha. Imininingwane yabo ngonyaka 12. Nokho, uphawu omusha ngamunye ubuyisela kulowo odlule kusukela ekuqaleni kwenyanga, futhi ngesonto eledlule.
Gemini futhi Aries: Umshado kwedivayisi
Usosayensi wezombangazwe washiya umhlalaphansi uStanislav Belkovsky
Dream Ukuhunyushwa: empini - indlela ukuwuqonda kuyiphupho nje?
Estrogen - indlela yokuthuthukisa? Indlela yokuthuthukisa izinga estrogen? i-hormone i-estrogen
Yini okudingeka uyenze ukuze ikhule izinwele ngokushesha?
Indlela ukuhlanza esikhwameni white lesikhumba